Falcon50 Tsy Mifantoka
fanontaniana Falcon50 Tsy Mifantoka
Misaotra anareo nandray: 4
2 taona 6 volana lasa izay #138 by FvS
Nafidina aho FSX ny Air Force 747 andro vitsy lasa izay ...
Tao anatin'ilay fiaramanidina dia nahatsikaritra ny môlekin'ny Falcon 50 autopilot, ny tontonana na ny anaran'ny anarana ...
Azoko ampiasaina amin'ity AutopilotFalcon50 ity ihany koa ny fiaramanidina hafa ary inona no tokony ataoko mba hahatongavana any amin'ny fiaramanidina hafa mba hiasa, misy mahafantatra ...... ?????
jereo ny attachment ....
Tsy hita ny fanafihana
2 taona 6 volana lasa izay #139 by FvS
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Gh0stRider203, luis1245
2 taona 6 volana lasa izay #168 by Gh0stRider203
YES! Ianao dia afaka. Nataoko teo anoloako izany. Fotoana elaela izany saingy HOPEFULLY manampy izany ...
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: FvS
2 taona 6 volana lasa izay #169 by Gh0stRider203
Miala tsiny fa tsy namaly ela kokoa. Tsy nahita ny lahatsoratrao aho. Ny ratsy
2 taona 6 volana lasa izay #174 by FvS
Thx be dia be ho an'ny valin, dia miezaka ny hahazo izany raikitra ....
2 taona 6 volana lasa izay #175 by Gh0stRider203
Mirary anao ho tsara vintana! mahafantatra raha mahasoa ity lahatsoratra ity. Tahaka ny efa nolazaiko, efa nataoko teo aloha ... saingy efa lol
2 taona 6 volana lasa izay - 2 taona 6 volana lasa izay #176 by FvS
Gh0stRider203 nanoratra: Tsara vintana! mahafantatra raha mahasoa ity lahatsoratra ity. Tahaka ny efa nolazaiko, efa nataoko teo aloha ... saingy efa lol
Afaka nahazo ny fiaramanidina Falcon50 Autopilot tamin'ny fiaramanidina hafa aho izao, dia afaka manidina miaraka amin'ny fiaramanidina amin'ny efijery manontolo ary ampiasa ny Falcon50 Autopilot amin'ny ambany ambany pejy amin'ny farany ambany ... Jereo ny sary mifandray ..greetings avy any Holandy .....
Fanovana farany: 2 taona 6 volana lasa izay FvS.
Fotoana mamorona pejy: 2.301 segondra